true study /zu-ZA/tools-for-life/study/steps/removing-the-first-block-to-learning.html read 2 8 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/study_zu_ZA.jpg UbuChwepheshe BokuTadisha
Lapho usuvule isango lokuqala lokufunda futhi wanquma ukuthi kunokuthile okufanele ukwazi mayelana nokutadisha, usukulungele ukufunda ngeziThiyo zokuTadisha. Kukhona nje ezintathu zalezi.
Isithiyo yinto engakuvimba noma ikuvimbele ekuqhubekeni uthuthuka.
Njengoba uzofunda, lapho ungena kwesinye sezithiyo zokutadisha, empeleni kungakwenza uzizwe ungakhululekile ngokomzimba nangokwengqondo. Ukuzwa ukungakhululeki ngenxa yento nako kwaziwa njengokusabela uma ubizwa. Ukusabela kusho lokho okuzwayo emzimbeni noma emoyeni wakho okuthola ngenxa yento ethile. Ungathola ukusabela kusuka ngomsindo omkhulu wokushayisana ungazelele, njengengozi yemoto, futhi mhlawumbe uphendule ngokuzwa ushaywa uvalo noma ukhungathekile futhi ukhathazekile.
Lapho usabela, ungakhombisa imizwa yakho ngesimo sobuso bakho noma ngendlela wenza ngakhona umzimba wakho. Lokhu kwaziwa njengokubonakaliswa. Ukubonakaliswa kusho uphawu noma uphawu olubonakalayo lokuthi kukhona okukhona noma okwenzekayo. Isibonelo, lapho uzwa ingozi, ungakhombisa ukucasuka nokukhathazeka ngokubukeka uthukile noma wenze konke ngokwethuka.
Ungathola futhi ukusabela okuvela ezindabeni ezimnandi futhi uzizwe ujabulile kakhulu. Ungakubonakalisa ngokumamatheka, ukuhleka, ukujabula kanye nokubukeka uthokozile.
Isithiyo ngasinye kwezintathu zokutadisha sikunikeza ngqo okubonakaliswa umzimba ngokusabela komzimba nokwengqondo.
Lapho wazi ukubonakaliswa kwesithiyo ngasinye, kulula kakhulu ukusho ukuthi isiphi isithiyo ohlangabezane naso. Futhi isithiyo ngasinye, sinezinyathelo zokuthathwa eziqondile ozofunda ukuzisebenzisa bese ususa lowo mgoqo emgwaqweni wakho wokutadisha ukuze uthuthuke kahle ekufundeni kwakho.
Uma usuzazi ukuthi yiziphi lezithiyo ezintathu, wazi umehluko phakathi kwazo futhi wazi ukuthi yini okufanele uyenze ukuzisusa endleleni yakho, ungavimbela zonke lezithiyo ezintathu ukuthi zingaphinde zikunqande.
Futhi ngokwazi nokusebenzisa lobu buchwepheshe, uzokwazi ukutadisha ngempumelelo futhi ufunde noma yisiphi isifundo.